Fianarantsoa: Sokatra miisa 245 nafenina tao anaty vatapaty
mardi, 06 février 2018 19:02
Tsy kely lalana ny mpanao fitaterana karazam-biby mampiavaka an'i Madagasikara fa misangy amin'ny fahafatesana mihitsy. Sokatra nafenina tao anaty valizy 3 ka nasitrika anaty vatapaty no saron'ny Polisim-pirenena ny alin'ny alahady hifoha alatsinainy lasa teo. Nisy rongony folo lasaka ihany koa tratra niaraka tamin'izany.
Fiara ambaran'ny mpamily azy fa niainga tany Sakaraha no nitondra ireo entana tsy ara-dalana ireo ka nizotra mianavaratra amin'ny lalam-pirenena faha-7 sy nandalo fisavàna mpitandro filaminana maro vao tratra teto Fianarantsoa.
Milaza ny Commissaire Central fa nampiahiahy teo amin'ny fisavàna teo Ankidona io fiara io ka narahana afara hatrany Alakamisy Ambohimaha ary dia naverina teto Fianarantsoa mba anaovana fanadihadihana lalina.
Efa nifanaraka amin'ny sampan-draharaha misahana ny tontolo iainana ny mpitandro filaminana ho fitazonana sy fiarovana ireo sokatra ireo, izay efa misy maty raha ny tsikaritra farany.
Mitohy kosa ny fikarohana momba ireo iray tsikombakomba amin'izao fitrandrahana tsy ara-dalana izao.